Gịnị kpatara nnukwu ọdịiche dị n'etiti pọmpụ $ 30 na $ 300-dollar?
Home / Foset Guide / Gịnị mere e ji nwee nnukwu ọdịiche dị n'etiti pọmpụ $ 30 na $ 300?
Gịnị mere e ji nwee nnukwu ọdịiche dị n'etiti pọmpụ $ 30 na $ 300?
2020 / 10 / 21 nhazi ọkwaFoset Guide 1407 0
Igosiputa ihe di iche na $ 30 na $ 3,00 fosets
Foset ihe nhazi ọkwa: The ahụ foset ihe na ahịa taa bụ: igwe anaghị agba nchara, niile-plastic, ọla, zinc alloy fosets na ndị ọzọ na edemede.
Brass: Brass bụ ihe a na - ahụkarị maka nrụpụta pọmpụ. E ji ọla kọpa mee H59 / H62 ọla kọpa. Nkedo adopts ígwè ebu maka ndọda mgbatị, na ya mgbidi ọkpụrụkpụ bụ edo, n'ozuzu 2.5-3.0 mm. Ihe eji eme ka ọla kọpa mara: enweghị nchara, ogologo oge, ọgwụ mgbochi, na ịmịcha mmiri.
Zinc alloy: ihe dị ala. Njupụta nke zinc alloy dị ala karịa nke ọla kọpa, aka na-adịkwa arọ karịa ọkpọkọ ọla kọpa. Elu nke zinc alloy dị mfe ịgbanye na mgbidi dị n'ime, na ntụ ntụ oxide ọcha ga-apụta n'elu. Ike dị njọ karịa nke ọla kọpa, ndụ ọrụ adịteghị aka, ọdịnaya ọdịnaya dị elu. Ọ bụrụ na ọkpọkọ nke zinc alloy bụ naanị otu ruo afọ abụọ, ọ ga-eme ka oxidize ma ree.
NgEnglandering plastics: ABS plastic foset nwere njirimara nke corrosion na-eguzogide, ịka nká na-eguzogide, enweghị nchara, enweghị ndu, na-adịghị egbu egbu, na-enweghị isi, nrụgide dị elu, ịdị arọ dị mfe, iwu ụlọ na ọnụ ala dị ala.
Steel Igwe anaghị agba nchara: Na narị afọ nke 21, ahụike na nchekwa gburugburu ebe obibi ji nke nta nke nta bụrụ isiokwu ọhụrụ nke ndụ ọhụụ. Igwe anaghị agba nchara bụ ihe mba ụwa ghọtara ahụike ahụike enwere ike ịkụbanye n'ime ahụ mmadụ. Ya mere, kichin na ngwaahịa ịsa ahụ nwere igwe anaghị ata nchara dị ka ihe bụ isi amalitela na-ewu ewu na mba Europe na America.
Foset n'ichepụta usoro: ájá foundry mgbatị, ntuziaka metal ebu mgbatị, nnukwu mpo agbapụtara igwe ma ọ bụ mgbatị ala mgbatị.
Imirikiti ọkpọkọ mmiri dị na ahịa dị n'okpuru yuan 150 bụ nke nkedo akpụ akpụ ájá, nke a na-akpọkarị "ájá achọtara". Na ngwaahịa ndị usoro a mepụtara, ihe owuwu nke valvụ ahụ dị ọcha, ọ dịkwa mfe ịmepụta ntụpọ dị n'ime "trachoma" na "stomata". Enwere ike ghara ịchọta ya n'ọdịdị. Ma mgbe oge ojiji, a ga-enwe ụta mmiri, mmechi akara ma ọ bụ mmejọ ka ukwuu. Igwe mmiri dị elu na-ejikarị ike ndọda, na ihe dị n'ime nke valvụ ahụ dị oke, nwere ezi mma na ndụ ogologo. Maka otu ahụ valvụ ahụ, ịdị arọ nke ngwaahịa ndị usoro abụọ a mepụtara dị iche, na oriri nke ihe dịkwa iche. The arọ dị iche n'etiti nnukwu mpo nkedo valvụ ahụ na ájá nkedo valvụ ahụ bụ ihe dị ka 1/4. Ya mere, otu ngwaahịa ahụ nwere ọnụahịa dị iche iche.
Mmepụta usoro nke ọkpọkọ: ọla kọpa ingot, mgbasa → nkedo (obere ọkwa nkedo na nkedo ájá, ọkpọkọ mmiri dị elu na nkedo ike ndọda) nhicha mgbe emechara nyocha nyocha mgbatị → ịkpụzi ihe nyocha nnabata → egweri nyocha nyocha → plating → nyocha nyocha, Mgbakọ, ule nyocha, nyocha ngwaahịa mechara, nkwakọ ngwaahịa, nnyefe.
Usoro mmepụta ihe dị otú a na usoro 16 siri ike, usoro nke ọ bụla nwere iwu siri ike na usoro mmepụta. Factorylọ ọrụ nke ika ahụ dabere na ụkpụrụ nke ngwaahịa mbụ, ngwaahịa nke abụọ anaghị ahapụ ụlọ ọrụ ahụ, mana obere ndị nrụpụta agaghị abụ ngwaahịa nrụzi nke mbụ na nke abụọ, yabụ enwere nnukwu ọdịiche na ọnụahịa. Yabụ, mgbe ị na-azụ pọmpụ, ị kwesịrị ị na-ahọrọ ụdị ọkpọ mmiri. Ihe ọ bụla bụ ngwaahịa dị elu, na obere onye nrụpụta dabere n'ọdịmma na agwa.
Gịnị mere ọkpọkọ ji agbawa?
Ihe mgbata mmiri ahụ na-agbawa n'ihi ngwaahịa na-adịghị mma ma ọ bụ nke mmadụ mere? E nwere isi ihe abụọ kpatara mgbatị na mberede:
1. Ihe igwe mmiri adịghị mma nke ọma. Akụrụngwa nke ndị na-emepụta fọọlụ na-adịkarị ala abụghị ọla kọpa, mana ụfọdụ ihe agwakọtara, ya mere, ike nke pọmpụ a rụpụtara ezughị. Na ntinye echichi na ojiji, mmebi nke ọkpọ ahụ na mgbanwe nke nrụgide mmiri nwere ike ime ka ọkpọkọ ahụ gbawaa ma kwụpụ.
2. Ejila ọkpọ mmiri eme ihe n'ụzọ na-ezighi ezi. Ọtụtụ ndị na-azụ ahịa nwere ike ghara ịghọta ike ha nwere mgbe ha na-etinye pọmpụ mmiri, nke na-eme ka ọkpọkọ “erughị eru” nke mbụ ka njọ. Na mgbakwunye na pọmpụ mmiri maka ịsa ahụ, ịsa ahụ nwere nkọwa dị oke mkpa nke a na-elegharakarị anya. Ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe mmasị ịpịgharị igwe mmiri na-agba mmiri na mmiri pọmpụ mgbe ha sachara. Nke a na-ebelata ndụ nke igwe ịsa ahụ ma bụrụ ihe egwu zoro ezo nke agbaji mmiri.
Gwara gị ebe $ 300 foset dị oké ọnụ karịa a $ 30 foset?
Ihe ọkpọ dị ugbu a n'ahịa na-abụkarị ígwè nkedo, plastik, zinc alloy, alloy copper, and steel steel. Irongwè nkedo na-adị nchara, plastik na-adịkarị nká, zinc alloy nwere nkwụsi ike na ọ na-adịkarị nro, na-eme ka ọ dị mkpụmkpụ. Ya mere, anaghị m akwado ịzụ ọkpọkọ ihe atọ a.
Ihe kariri 90% nke ihe ndi ozo di elu na ulo na mba ndi ozo na-achota nkedo ọla. Brass bụ ihe kachasị mma nke ọkpọkọ mmiri ma nwee mmetụta antibacterial. N’etiti ha, ọla kọpa H59 kachasị mma, yana ọdịnaya ọdịnaya tozuru oke. H62 ọla kọpa na ọdịnaya na-eduga na-adịwanye ala ma na-eguzogide corrosion; Ọ bụ ezie na igwe anaghị agba nchara nwere ike ịbụ nke enweghị ndu, ọ bụghị ewu ewu ugbu a n'ihi usoro ya dị mgbagwoju anya na enweghị uru nke antibacterial nke ọla kọpa.
A na-agbanye ma gbanye ọkpọkọ mmiri kwa ụbọchị, isi valvụ ahụ na-ekpebi ndụ ọrụ nke ọkpọkọ ahụ. Ka ọ dị ugbu a, isi seramiiki bụ isi ihe kacha mma maka ihe eji arụ ụlọ. Akwa-ọgwụgwụ foset valvụ cores na-ukwuu n'ime dị ma ọ bụ mba ọzọ mbụ seramiiki valvụ cores, nke bụ inogide na ike iru 500,000 ugboro na-enweghị leakage.
A na-eji ihe eji ígwè eme ihe dịka valvụ na ọla kọpa. A ga-eyi ihe ndị dị otú ahụ metal ma mee nchara mgbe ogologo oge were ha, na-eme ka ịgbanwu mgbanaka na-adịghị mma ma ọ bụ akara siri ike.
Ngwongwo mmiri nke eriri ọkpọkọ dị elu bụ nke igwe anaghị agba nchara. Ngwunye eriri mmiri ya bụ eriri 304 zuru ezu, n'ihi na nrụgide mmiri nke eriri 304 na-ebu na ịdị ọcha nke mma mmiri bụ ihe niile A na-emesi ya obi ike.
4. Onye na-ekwu okwu
Onye na-afụ ụfụ mmiri nke dị elu nwere ike inye ndị na-eri ahụ ezigbo ahụ ịsa ahụ. Ojiji nke ngwa ndị a na ihe ndị a nwere ike hụ na ngwaahịa dị mma.
5. Ihu teknụzụ
Uzo nke kpalitere okpukpu okpukpu di elu nwere otutu ihe yiri enyo. Mgbe ị jiri mkpịsị aka gị pịa ya, akara akara aka ga-apụ n'anya ozugbo. Ọzọkwa, teknụzụ electroplating na-eme ka gburugburu ebe obibi dị elu nwere ike igbochi mmetọ nke ngwaahịa na nke abụọ ma hụ na mmiri dị ọcha. Maka ọtụtụ akụrụngwa ịdị ọcha, usoro electroplating bụ ihe kwekọrọ na plasta chrome.
6. Ndụ ọrụ
Igwe mmiri dị elu nwere ezigbo mma mgbe afọ ise gachara, ha niile na-egbo mkpa nchekwa mmiri mba. Ogologo oge, nchekwa nchekwa na nchekwa gburugburu ebe obibi nke ngwaahịa ha gosipụtara uru nke ngwaahịa ndị a. Ndụ bara uru nke ọkpọkọ dị ọnụ ala dị mkpụmkpụ, ọbụlagodi mgbe ejiri ọnwa abụọ ma ọ bụ atọ mee ihe, a ga-enwe ahịa ma ọ bụ ihe ọghọm, na nchekwa ahụ dị obere, yabụ anaghị atụ aro ka ndị ahịa zụta.
7. Mgbe-ahịa nkwa
Emepụtara site na ndị nrụpụta oge niile, yana sistemụ ọrụ ahịa zuru ezu nke mba. N'agbanyeghị ngwaahịa ahụ nwere ihe ọghọm ma ọ bụ ọdịda, ndị nrụpụta ma ọ bụ onye na-ekesa ya ga-ahụ maka idozi ya n'oge ọ bụla. Dị ndị nwere ngwaahịa nhazi dị elu kachasị dị elu, ha na-echekwa maka ahịa. Okwu onu site na ngwa ahia obula
Nke gara aga :: Họrọ Rightlọ Nri Kwesịrị Ekwesị Osote: The Ultimate Guide To How To Choose 6 Categories Of Bathroom Ngwa
2020 / 11 / 19 647
2020 / 11 / 19 629
2020 / 11 / 18 615
2020 / 11 / 16 627